မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Shaoxing ငါးမျှားချည်မျှင် Co. , Ltd မှ။
ကျနော်တို့ကိုကိုးကားများအတွက်နမူနာ get နိုင်သလား?
free.New ဖောက်သည် express ကိုအဖိုးအခပေးဆောင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဘို့လက်၌တူညီသောသို့မဟုတ်အလားတူနမူနာပေးပို့ဖို့အတှကျဝမျးသာအခါအရပျကိုအစမ်းအမိန့်ပြန်အမ်းလိမ့်မည် yourrequired ကဲ့သို့တူညီသောနမူနာလိုအပ်လျှင်, နမူနာတာဝန်ခံပေးဆောင်ဖို့လိုတယ်အခါအရပ်ဌာနအမြောက်အများထုတ်လုပ်မှု၏အမိန့်, ဒီတာဝန်ခံပြန်အမ်းမည်ဖြစ်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်ပိတ်ထည်ကွဲပြားခြားနားသောပုံမှန်ထက် deliver.As, 15-25 အလုပ်ရက်ပေါင်းရှိသည်။
ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ MOQ ကော?
အဓိကအားဖြင့်အထည်များအတွက် 2000m ။ (ပိတ်ထည်၏အထူးသတ်မှတ်ချက်များ မှလွဲ. )
မျက်မှောက်အချိန်တွင် T / T သို့မဟုတ် L / C ကို။
အထည်များအတွက်: တစ်ခုမှာတစ်ဦး polybag အတွက်လိပ်နှင့်ပြင်ပရှိအဖုံး PP Bag ။ ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့ requirement.For ယူနီဖောင်း, တဦးတည်း polybag အတွက်တဦးတည်းအစုံနှင့်တဦးတည်းစက္ဏူထူအတွက်ထုပ်ပိုးတိုင်း 20 အစုံမှ couldaccording ။ ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်နိုင်ဘူး။
ငါတို့သည်သင်တို့ငါတို့သည်သင်တို့၏စစ်ဆေးခြင်းကိုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသောအခမဲ့နမူနာပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုရန်သင့်နမူနာပေးပို့ခြင်း, ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့အမိန့်ရှေ့၌သင်တို့ခွင့်ပြုချက်များအတွက်ကောင်တာနမူနာစေမည်။
(1) ပြဿနာများ၏ဓာတ်ပုံများကို ယူ. ကျွန်တော်တို့ကိုပို့လိုက်ပါ။
(2) ပြဿနာများ၏ဗီဒီယိုများ ယူ. ကျွန်တော်တို့ကိုပို့လိုက်ပါ။
(3) စသည်တို့ကို, စက်, ဆေးဆိုးသို့မဟုတ်ပုံနှိပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကဲ့သို့သောကျနော်တို့ပြဿနာတွေအတည်ပြု us.After မှ express ကိုအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာအထည်ပြန် Send, သုံးရက်အတွင်းမှာပဲငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အစိတ်ကျေနပ်မှု program ကိုဖွင့်ဆွဲပါလိမ့်မယ်။